Fiatrehana ny fifidianana: hampanao fifarahana ireo kandidà ny Ceni | NewsMada
Fiatrehana ny fifidianana: hampanao fifarahana ireo kandidà ny Ceni
“Fifanarahana eritreretina hataon’ny kandidà: voalohany, tsy an-tery aloha izy io. Heverina fa ho finiavana sy ho an-tsitrapo no heverin’ny Ceni fa hahazoana ny sonia sy ny fifanarahan’ireo kandidà ho mpirotsaka hofidina amin’izao fifidianana izao.” Izay ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, momba ny vinavinan’ny Ceni hampanao fifanarahana ireo hirotsa-kofidina ho filohan’ny Repoblika.
Ny antony, na eo aza ny didy aman-dalàna velona misy eto Madagasikara: heverina fa ho tsaratsara kokoa raha misy ny fifanarahana sy ny fanaovan-tsonia, izay hametrahan’ireo kandidà rehetra ny fepetra hitondrana ny fampielezan-kevitra sy ny vanim-potoana mialoha ny fampielezan-kevitra, ary hitondrana ny fifanarahana amin’izay ho fihetsika aorian’ny voka-pifidianana.
Hafa kokoa ny fifanarahana no ho ny lalàna
Ny tanjona, ny hametrahana hatrany ny tontolo manodidina milamina hahazoantsika mitondra sy manatanteraka ny fifidianana. Marina fa efa misy ny lalàna mifehy ny fomba fitondran-tena ara-politika sy ny fomba fitondran-tena amin’ny fiatrehana ny fifidianana.
Hafahafa kokoa raha fifanarahana, ohatra, no atao: amin’izay, amin’ny maha mpanao politika ny mpanao politika, tokony ho modely amin’ny fanajana ny teny nomena sy amin’ny fanatanterahana ny sonia atao ireo kandidà mirotsa-kofidina.
Raha lalàna, eritreretina toy zavatra an-tery. Na toy ny sazy ny zavatra rehefa avoaka amin’ny lalàna. Mba hahatsaratsara kokoa azy, raha tanteraka izay fifanarahana izay.
Havoaka alohan’ny 8 septambra ny lisitry ny biraom-pifidianana
Nisy fitomboany ny biraom-pifidianana manerana an’i Madagasikara. 20 070 teo ho eo izany tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna, taona 2015, hiakatra ho 25 000 any ho any amin’izao fifidianana izao. Ny 8 septambra no fe-potoana farany hahazoan’ny Ceni mamoaka ny lisitry ny biraom-pifidianana.
“Manome toky anareo kosa izahay fa tsy hiandry ny fe-potoana farany, 60 andro mialoha ny fandatsaham-bato izay, fa havoakanay mialoha lavitra ny 8 septambra izay lisitra sy ny isan’ny biraom-pifidianana izay”, hoy izy. Mba hisian’ny fangaraharana izany, hahazoana manamarina any an-toerana hialana amin’ny ahiahy hoe misy ny biraom-pifidianana matoatoa.
Heverina fa raha misy ny fitarainana momba ireo biraom-pifidianana ireo, mba ho tonga mialoha aty amin’ny Ceni hahazoana manarina izay tokony hahitsy.